Shirka Horumarinta Qaranka Sagaalaad oo ka furmay magaalada Dhuusamareeb – Somali Top News
Shirka Horumarinta Qaranka Sagaalaad oo ka furmay magaalada Dhuusamareeb
Waxaa maanta si rasmi ah Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug uga furmay Wadatashiga wareegga kowaad ee Qorshaha horuamrinta Qaranka Sagaalaad oo ahmiyad ballaaran u leh dalka .
Waxaa daahfurka wadatashiga ka qeyb ka ahaa Xubna ka kala socda golaha Wasiiradda Galmudug, buslahda rayidka Maamulka iyo Khubarada Qorshahan shaqaalaha Wasaaradda Qorsheynta Qaranka
Bulshada ku nool deegaanada Galmudug ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyay qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed, ayna diyaar u yahiin in baahiyahooda ay ku biiriyaan Qorshaha Harumarinta Qaranka Sagaalaad.
Guddoomiyaha Gobalka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale oo munaasabada ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wadatashiga wareegga kowaad ee Qoshaha Horuamrinta Qaranka Sagaalaad, waxuuna bogaadiyay dadaaalada ay wado Wasaaradda Qorsheynta Qaranka.
Wasiirka Qorsheynta Dowladd Gobaleedka Galmudug Cabdikaafi Qaaf ayaa sheegay in farxad wayn u tahay maamulka Galmudug,in ay qeyb muhiim ah ku yeeshan wadatahsiga Qorshaha horumarinta Qaranka Sagaalaad, isla amrkaana ay diyaar u yahiin in baahiyaha u baahan wax ka qabashada ka Galmudug ahaan in ay Khubarada la wadaagaan si uu qeyb ugu noqdo Qorshaha Horumarinta Qaranka Sagaalaad.
← Madaxweyne Farmaajo oo gaaray magaalada Sharma Al-Sheekh si uu kaga qeyb galo shirka EU iyo AL
Magaalada Garoowe oo lagu qabtay dhalinyaro ku hubeysneyd Tooreey iyo Agab kale →
Dowladda Soomaaliya oo dib u soo celisay Tahriibayaal ku xanibnaa dalka Libya
March 20, 2019 March 20, 2019 Somali Top News 0
Wararkii ugu dambeeyay ciidamada AMISOM oo saldhig ka sameystay garoonka Dhuusomareeb
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo cod u qaaday xubin lagu daray Guddiga D.Q